Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 76384 Hogwarts Moment: Herbology အတန်းအစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
29 / 03 / 2021 30 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 853 Views စာ0မှတ်ချက် 71022 ဟယ်ရီပေါ်တာ, 71028 ဟယ်ရီပေါ်တာစီးရီး 2, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ပြောင်းလဲခြင်းအတန်းအစား, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးရည်, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း, Cedric diggory, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟော့artအချိန်ကာလ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, နဗီး Longbottom, ပါမောက္ခအညွှန့်, reviews
၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း ယခုနှစ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမြေဆီလွှာတွင်အမြစ်စိုက်သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၎င်း၏အကောင်းဆုံး buildable စာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုသို့ပွင့်။
မွမ်းမံခြင်းနှင့်တိုးချဲ့၏သုံးနှစ်အကြာတွင် ဟယ်ရီပေါ်တာမူရင်း (ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း) ၁၀ နှစ်တာကာလ၏အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်သော the Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် ၂၀၂၁ အတွက် Hogw တွင်အသစ်စက်စက်ကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်artအချိန်ကာလ။
ကျနော်တို့ပြီးသားကိုင်တွယ်ပါတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ပြောင်းလဲခြင်းအတန်းအစား (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးရည် (ပြန်လည်သုံးသပ်) - ဒါကြောင့်ငါတို့ခါးပတ်အောက်မှာနှစ်ခုအလွန်ဆင်တူစာအုပ်များ, လုပ်နိုင်တဲ့နှင့်အတူ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း အရာများကိုလတ်ဆတ်စွာထားရှိပါ၊ သို့မဟုတ်သေတ္တာထဲကညှိုးနွမ်းသွားမည်လား။
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း ဖြန့်ချိ: ဇန်နဝါရီလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 27.99 / $ 29.99 / € 29.99 အပိုင်းပိုင်း: 233 အသေးစားပုံများ: 3
၎င်းတို့သည်တူညီနေသော်လည်း Hogw တစ်ခုချင်းစီအတွက်သက်သေခံချက်ဖြစ်သည်arts Moment ကသူတို့၏တည်ဆောက်မှုများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကွဲပြားနေသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။ အဓိကစာအုပ်မျက်နှာဖုံးစည်းဝေးပွဲသည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်တူညီသည်။ သို့သော်တည်ဆောက်မှု၏အများစုမှာတစ်ခုချင်းစီ၏အတွင်းပိုင်းကိုသာအဓိကထားသည်။ ဒီဇိုင်နာများက၎င်းတို့အားလုံးကိုဖမ်းရန်လိုအပ်နေသော Potterheads များအတွက်လတ်ဆတ်သောအရာများအားသိမ်းထားရန်အခွင့်အရေးယူခဲ့သည်။
၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း အလွှာ ၄ ခုအနက်မှအလွယ်ကူဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက် patch သည်စာအုပ်လေးအုပ်ကို ဖြတ်၍ အတွင်းပိုင်း topper အတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုဖြစ်သော်လည်းဖရုံသီးများ၊ အပင်များနှင့်ဖန်လုံအိမ်တည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူဖန်လုံအိမ်တည်ဆောက်ပုံတို့ဖြင့်အတုယူစရာသင်ခန်းစာကိုအားကိုးအားထားပြုထားသည်။ (ဒါဟာကျိန်းသေ beats ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးရည်'' s ကို 'table'2 ×2Jumper ပြားများစုဆောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအရာတစ်ခုပြုလုပ်ရန်မကြိုးစားခဲ့ပါ။ )
ဤအကြောင်းအရာအလိုက်ဒီဇိုင်းသည်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြင့်တီးခတ်ထားသောပြဇာတ်တစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းစွာအကျိုးရှိသည်။ အပြင်ဘက်ထိပုတ်ပါ၊ ခေါက်စားပွဲ၊ ကက်ဘိနက်၊ အပင်များနှင့်ပန်းချီကားများဖြစ်သော Mandrakes သည်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်artပါ ၀ င်သောအက္ခရာသုံးလုံးအတွက်မှားချက်များနှင့် (ဥပမာ) ထက် ပို၍ သဟဇာတဖြစ်မှုကိုခံစားရသည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးရည်ကျပန်းလက်တင်ကုလားထိုင်
အကယ်၍ သိသာထင်ရှားသည့်ဝေဖန်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါက၎င်းသည်အနည်းငယ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်များ၏စပျစ်နွယ်ပင်များသည် Hogw နှင့်မည်မျှသက်ဆိုင်ပုံကိုကောင်းစွာစနစ်တကျဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။art'' ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပိုပြီးသိသာထင်ရှားတဲ့ဝေဖန်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့ဟာအခြား Hogw ကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်artMoment reviews - စတစ်ကာများအပေါ်အလွန်အကျွံမှီခိုမှုသည်စိမ်းလန်းစိုပြေမှုအများစုမှလာသည့်နေရာဖြစ်သည်။
သို့သော်ဤအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်တကယ့်အလှတရားသည်စာအုပ်ကိုပိတ်ပစ်ရန်အရာခပ်သိမ်းအတွင်း၌အဘယ်အရာကိုသိမ်းထားသနည်း။ စာအုပ်၏စာမျက်နှာများကိုဖွဲ့စည်းရန်အရာရာတိုင်းကိုသပ်ရပ်စွာခေါက်သိမ်းထားရန်သေချာသွားပြီဟူသောအတွေးသည်သင် Hogw တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခုသို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါစေ၊arts Moment စုံနှင့်၎င်းသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းဖြင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်ကစားနိုင်စွမ်းသည်ဒုတိယနေရာတွင်မရှိပေartဤမျှလောက်များစွာသောမဟုတ်ရင်မတူကွဲပြားသောအသင်းတော်များနှင့်အတူအစု၌ icularly ။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မကူညီနိုင်ပါကအနည်းဆုံးဤအကွာအဝေးတစ်လျှောက်လုံးရှိတိတ်ဆိတ်သောထိကိုမထိနိုင်ပါ။ အသံတိတ်နေသောအရောင်များသည်ကောင်းမွန်သော်လည်းစာအုပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအိမ်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်အရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးထားဆဲဖြစ်သည်။ ဒီမှာအဝါရောင်တောက်ပြောင်နေလျှင်eသည်ရင်တောင်စွဲမက်စရာကောင်းလိမ့်မည်artမှောင်မိုက်နေသည့် hy tones သည်ထူးဆန်းစွာသင့်လျော်သည်ဟုခံစားရသည်။
၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် buildable စာအုပ်တွေလိုပဲ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း ဤအမှု၌ Cedric Diggory ဖြစ်သည့်သက်ဆိုင်ရာပါမောက္ခ၊ Gryffindor ကျောင်းသားနှင့်အိမ် - တိကျတဲ့ကျောင်းသားတို့ပါဝင်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွင် Cedric အနည်းငယ်ကွဲပြားခဲ့သော်လည်းဤဝတ်စုံတွင်သူ့ကိုပထမဆုံးတွေ့ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။
နဗီးလ် Longbottom သည် Gryffindor (တိုင်း Hogw) ကိုကိုယ်စားပြုသည်arts Moment မှအနည်းဆုံးကျောင်းသားတစ် ဦး ပါ ၀ င်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာပထမ ဦး ဆုံး 71022 တွင်ထည့်သွင်းတူညီမူကွဲ update 's အိမ် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Fantastic သားရဲ စုဆောင်းထားသောအသေးစား။ သူကအများဆုံးအီးမဟုတ်ပါဘူးarth-shattering minifigure န်းကျင်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခု - တိကျတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးက ဦး ခေါင်းပုံနှိပ်ကြိုဆိုသည်။
ပါမောက္ခ McGonagall အတွက်ပြပွဲခိုးယူသကဲ့သို့ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ပြောင်းလဲခြင်းအတန်းအစားဒီပါမောက္ခမှာထိပ်ဆုံးကပါလာသူပါမောက္ခ Sprout ပါ။ သူမသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတူညီသော ဦး ထုပ်နှင့်ဆံပင်ပုံသဏ္combာန် combo ကိုအသုံးပြုသည် 71028 ဟယ်ရီပေါ်တာစီးရီး 2သို့သော်အခြားအရာအားလုံးသည်အသစ်သော - သူတို့အားတောက်ပသောပုံသွင်းသောခြေထောက်များအပါအဝင်။ (ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံသွင်းသောခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုဘယ်သောအခါမျှချီးမွမ်းမည်မဟုတ် တိုင်း minifigure ပိုကောင်းကြည့်ရှုသည် သူတို့နှင့်အတူ။)
ဒါကအသေးဆုံး Hogw ပါartတစ်ခဏချင်းစီရေတွက်ကြည့်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်။ မရချေ။ သူတို့ဘေးချင်းယှဉ်။ ထိုင်ကြသောအခါသူတို့အားလုံးသည်တူညီသောတန်ဖိုးကိုရကြသည်။ မေးခွန်းအမှန်မှာဤတန်ဖိုးသည်ကောင်းသည်၊ မကောင်းသည်လား၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည့်အဖြေသည် 'တစ်နေရာရာမှာ' ရှိမရှိဖြစ်သည်။
ပေါင် ၂၇.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ တို့၏ကုန်ကျစရိတ်မည်သည့်နေရာတွင်ကုန်ဆုံးသွားသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ (ဤကြီးမားသောစာအုပ်အဖုံးများသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ပေးဆပ်ရန်မလွယ်ကူ) သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင် Hogw တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းarts ခဏလေးသုံးသပ်ချက်များ extra minifigure ကမျိုချရတာပိုလွယ်ကူစေတယ် - particularly ချောမော်ဒယ်များ၏ပတျသကျ။ အလှနျသေးငယ်သောအရွယ်အစားပေးထား။
စုစုပေါင်း - တစ်ခုလုံး - ခွဲခြားရန်ခက်ခဲနေသောလေးစုံကိုဖြတ်ပြီး, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း ကြွင်းသောအရာအထက် Mandrake ရဲ့ ဦး ခေါင်းပဲရပ်။ အတွင်းပိုင်းတွင်ထုပ်ပိုးထားသည့် mini-build များသည်စည်းလုံးမှုနှင့်သင့်လျော်မှုကိုခံစားရသည်။ အသေးစားပုံများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအားကောင်းသောဖြည့်စွက်မှုများဖြစ်သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ သင်စုဆောင်းထားသည့်အရာများ၊ ကျန်အရာများအားလုံးကိုသင်တည်ဆောက်ပြီးပြီဆိုလျှင်တောင်သင် ဆက်လက်၍ နေ ဦး မည် marvel စာအုပ်ပိတ်ထားရန်အရာခပ်သိမ်းသည်ပြိုလဲသွားပုံကိုဖြစ်သည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီအကွာအဝေး၏အားနည်းချက်များကိုမျှဝေသည်။ စျေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်မားသည်ဟုခံစားရပြီးစတစ်ကာများအလွန်များနေသည်။ သို့သော်သင် Hogw တစ်ခုသာဝယ်ပါကarts Moment စုံ၊ ဒီဟာမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်လိမ့်မယ်။
၇၆၃၈၂ Hogw တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်းarts Moment: ရောဂါဗေဒအတန်းအစား?
သင်တည်ဆောက်ရန်အကြမ်းအားဖြင့် ၄၅ မိနစ်ဘေးဖယ်ထားရန်လိုအပ်သည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း, အ Hogw ၏ကျန်နှင့်အတူတန်းတူဖြစ်ပါတယ်arts Moment line-up ထိုစတစ်ကာများအတွက်သင်အမြဲတမ်းလက်ကိုင်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။
၇၃၈၂၂ Hogw တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသည်arts Moment: ရောဂါဗေဒအတန်းအစား?
၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း 233 အပိုင်းအစများ, မည်သည့် Hogw ၏အနည်းဆုံးဖွဲ့စည်းထားသည်arts Moment - ဒါပေမယ့်မခံစားရဘူးartအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်နိမ့်ကျသောတန်ဖိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်အစုံလေးခုစလုံးတွင်အကောင်းဆုံးအသေးအဖွဲများရှိသည်။
76384 Hogw သည်မည်မျှကြီးမားသည်arts Moment: ရောဂါဗေဒအတန်းအစား?
တခြားအရာတွေလိုပဲ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဟော့artအချစ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း ၁၂ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၈ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၄ စင်တီမီတာရှိသည်။ အဆိုပါယူနီဖောင်းအရွယ်အစားသူတို့တစ်တွေစင်ပေါ်ပေါ်မှာကောင်းစွာထိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။
၇၆၃၈၂ Hogw ဘယ်လောက်ကျလဲarts Moment: ဆေးပညာအတန်းအစားကုန်ကျစရိတ်?
၇၆၃၈၆ Hogwarts Moment: ဆေးပညာအတန်း ယူကေတွင်ပေါင် ၂၇.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၂၉.၉၉ နှင့်ရောင်းချမှုသည်အနည်းငယ်မြင့်သည်ဟုခံစားရသော်လည်းသင်၏ပြforနာအတွက်စာအုပ် ၁၀ မျက်နှာစာ ၁၆ ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
← Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်းသည် TIE ဗုံးကြဲလေယာဉ်အသစ်ကိုတွေ့ရသည်
Disney Obi-Wan Kenobi ၏အကန့်အသတ်ရှိသောပွဲစဉ်များကိုသရုပ်ဆောင်မည် →